छोटकरीमा : 'जोशी र घिमिरे'को तस्बीर अंकित हुलाक टिकट विवाद के हो ?
सरकारले राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको तस्वीर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। दुई आदरणीय व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले दिएको सम्मानलाई सबैले सराहना गरे । तर, हुलाक टिकटको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि भने विभिन्न टीका-टिप्पणी भएका छन् । त्यस्तो किन भयो ?
सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र स्व. राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको तस्वीर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
'उहाँहरु आफैंमा पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँहरुका नाम अगाडि डा. नथपेको भए अझ बढी यथार्थ र इज्जतिलो हुन्थ्यो। जे भएपनि सरकारले गरेको यो काम प्रशंसा योग्य छ ।'- वरिष्ठ पत्रकार तिर्थ कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन्।
यसैगरी,आम सञ्चारका प्राध्यापक भानुभक्त आचार्यले फेसबुकमा ‘मानार्थ पिएचडी र ‘पीएचडी’ फरक हुन् भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्मा मन्त्रिपरिषद्ले हुलाक टिकटमा नाम राख्ने निर्णय आफैँमा सम्मानको लागि भएको भन्दै यसमा अपमान हुने कुरै नभएको बताउँछन्।
दुई व्यक्तित्वहरुकै इच्छामुताबिक नामअघि डा. राखिएको बताइएको छ। टिकट प्रकाशनको प्रयोजनार्थ दुवैतर्फबाट पठाइएको बायोडाटामा नामअघि डा. उल्लेख बताईएको छ।
सत्यमोहन जोशी र माधवप्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन हुने